विचारात्मक निबन्ध | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 08/14/2010 - 20:19
जिन्दगी एउटा अपरिभाषेय वस्तु ... । संसारका ठूलाठूला दार्शनिकहरूले पनि उहिलेदेखि अहिलेसम्म अनेक तरिकाले अथ्र्याउन प्रयत्न गर्दा पनि राम्ररी नअर्थिएको वस्तु । जिन्दगीलाई कसैले धर्मसँग त कसैले कर्मसँग जोडेर अथ्र्याए, कसैले राजनीतिसँग त कसैले अर्थनीतिसँग अनि कसैले भोकसँग त कसैले भोगसँग जोडेर अथ्र्याए पनि पूर्ण अर्थ दिन नसकिएको वस्तु । अनेकले अनेक ढङ्गले अर्थ्याउन खोजेको तैपनि राम्ररी नअर्थिएको अनि जति अर्थ्याउन खोजे पनि चुरो भेट्टाउन नसकी टुप्पो समाउँदा फेद फुत्किने र फेद समाउँदा टुप्पो फुत्किने अद्भुत वस्तु ।
kbs — Thu, 07/15/2010 - 19:56
जीवनमा आगमन हुने अनगिन्ती रङहरूमा सधैँ मौसम एकैनासको नहुनु अस्वाभाविक छैन । परिवर्तन त ऋतु आगमनको सङ्केत मात्र होइन, ऋतु बिदाइको संयोग पनि हो । रिमझिम रिमझिम वर्षाद्मा पानीसँग संवाद गर्दाको पललाई कुनै सुन्दर स्वप्न देखेजस्तै रूपमा आकषिर्त हुन सकिन्छ भने हिउँदको कठ्याङ्ग्रिंदो जाडोमा सबैलाई रापिलो घामको चाह हुन्छ नै, म पनि कुनै अपवाद होइन ।
kbs — Sat, 07/10/2010 - 14:45
हेमिङ्वेको "बूढो मान्छे र समुद्र" उपन्यासमा एकजना बूढो पात्र छन् । माछा पकडिने सिलसिलामा ऊ किनाराबाट धेरै टाढा पुगेको हुन्छ । उसले तीनदिन लगाएर ठूलो माछा जालीमा पार्छ । माछाको धुनमा उसलाई भोक तिर्खा पनि लाग्दैन । माछा लिएर किनारतिर फर्किन्दै गरेको हुन्छ जालीमा रहेको माछालाई अरु माछाले लुछ्दै खान्छन् । जब किनारामा आइपुग्छ माछाको मासुजति सकिन्छ । माछाको नाममा केवल अस्थिपिञ्जर बाँकी रहन्छ । मान्छेको जीवन यस्तै हुन्छ, धेरै धेरै कमाउने सपनाले देशविदेश लाग्छन् । तर अन्तिममा त्यस्तै अस्थिपिञ्जर बाँकी रहन्छ । अहिले हङकङका संघसंस्थाहरूका कार्यक्रमहरू पनि यस्तै छन् । यो यथार्थ आज अलिकति छ भोलि फैलिएर जानेछ । किनभने मानवीय क्रियाकलाप भित्रको एउटा पलायनताको संकेत । यस्तै बेमौसममा पनि चर्चाको सगरमाथा छन् "स्रील मिस्ट" का डायास्पोरिक लेखक रामकृष्ण वान्तावा चर्चाको ओलिम्पिक र्टच बोकेर यतिखेर ।
kbs — Tue, 07/06/2010 - 16:28
त्यस दिन ३ कक्षामा पढ्ने नातिनीको एसएमएस प्रश्नले एक वर्षअघि देवीबहादुर थापा (सुरभि स्रष्टा परचिय, पृ.१११)को एउटा टिप्पणीको याद दिलायो । उनले सोधेकी थिइन् ः 'हजुरबा, मिडासलाई जे छोए पनि सुन भएपछि खानेकुरा पनि छुनासाथ सुनै हुने कुरा किन याद भएन ?'
kbs — Sun, 07/04/2010 - 11:30
'मृत्युपछिको अभिव्यञ्जन'मा बालकृष्ण समले आफू मरेपछिको परिस्थिति चित्रण गरेका छन् । मरेपछिको शून्यको अवस्थामा समलाई केही दुःखेको छैन, केही बिझेको छैन । बौद्ध शून्यमा उनका दुःखहरू बिसाइएका छन् । भौतिक नभएर मरेका सम अभौतिक वा चेतन-शून्य स्थितिमा छन् । जल, वायु, प्रकाश/अग्नि र माटोसँग उनको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ ।
kbs — Sun, 07/04/2010 - 11:08
यो एक्काइसौँ शताब्दी हो । अहिले संसार अचम्मैसँग बद्लिएको छ । यति धेरै फैलिएको यो संसार पनि सानो भइसकेको छ । सानो छँदा टेबलमाथि राखिएको पृथ्वीको डल्लोलाई म खुब घुमाईघुमाई हेर्ने गर्थें । ईंटको आकारको नेपालसँगै भारत, चीन, रुस र अरू थुप्रै देशहरूका नामहरू पढ्दै जान्थेँ म । मेरो सानो चेतनामा त्यो भकुण्डो जस्तो गोलो पृथ्वीका उर्द्धरेखा र समानान्तर रेखा अनि नीलो जलराशिको पृष्ठभूमिमा माकुराको जालोजस्ता किरमिर कोरिएका देशहरूका अनेक आयतनका नक्साहरूले मलाई आकषिर्त गर्थ्ो ।
kbs — Wed, 06/30/2010 - 19:01
करोड किलोमिटरको यात्रा दस इञ्च छोटो सानो पैतलाबाट सुरु गर्नुछ । यो पैतालाको पनि केवल एकएक कदमबाट अन्तिम गन्तव्य टेक्नु छ । हिँड्नु छ धेरै लामो यात्रा तर हामी प्रस्थान बिन्दुमा नै अल्मलिरहेका छौँ । चढ्नु छ निकै अग्लाअग्ला शिखरहरू तर हामी फेदीमा नै मस्मिन्द घुरिरहेका छौँ । हामी आफ्ना छोटा टाङले हजारहजार कि.मी. एकैचोटि फड्को हान्ने कल्पना साँचेर वर्तमानको यात्रा बिसाउँछौँ ।
kbs — Wed, 06/30/2010 - 18:42
अनुभूतिको नदीमा छु ।
लाग्छ, जोखिममा छ अनुभूतिको सम्पूर्णता पनि । अखण्ड दुस्साहसहरूले प्रहार गरेका छन् । संवेदनाको सारसौँदो स्वरूपमाथि ।
kbs — Wed, 06/30/2010 - 18:32
'गुरुकुलमा जुत्ता' यो कस्तो शीर्षक बनाइएको हो जसको कुनै सङ्गति या मेल नै देखिँदैन भन्ने पाठकलाई लाग्नसक्छ । 'गुरुकुलमा जुत्ता' भन्नु भन्दा त गुरुकुलमा विद्यार्थी, शिष्य वा चेला भनेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने किसिमका धारणा वा विचार आउनु स्वाभाविकै हो ।
झरीसितै झर्‍यो मन
kbs — Wed, 06/30/2010 - 17:59
अहिले कलम उचाल्दा २०६६ साल माघको उत्तरार्द्ध छ, 'उत्तरायण' को सुरु गर्ने यो महिना सकिन पनि अब तीनैदिन मात्र बाँकी छ । आजै बाहिर चिसो बढ्दै जानुमा सबैतिर हिउँदे झरी सिमसिम बर्सिरहेका कारणले भएको बुझिन्छ । आफ्नै घरभित्र कैद छु म पनि । यही एकान्त समयको फाइदा उठाइ दुई-चार अक्षर कोर्ने विचार उदायो, तुरुन्तै ।
अन्यया,दमन साहना छाडी,उठ अब चेली